The University of Melbourne - Higher Education na Australia
The University of Melbourne Nkọwa
tọrọ ntọala : 1853
Echefukwala atụle The University of Melbourne
Idebanye aha na The University of Melbourne
The University of Melbourne (-anọghị n'ozi Melbourne University, Melbourne Alaeze ma ọ bụ nanị Melbourne) na ihe Australian publicresearch mahadum dị na Melbourne, Victoria. hiwere na 1853, ọ bụ Australia nke abụọ nke mahadum kasị ochie na kasị ochie na Victoria. Times Higher Education kwubara Melbourne dị ka 33rd na ụwa, mgbe Ọmụmụ ọkwa nke World Universities nsị Melbourne 44th na ụwa (ma mbụ na Australia). Dị ka QS World University Isiokwu Rankings 2015, na University nke Melbourne na-họọrọ 5th na ụwa maka muta, 8nke na iwu, 13nke na kọmputa sayensị na IT, 13nke na nkà na Humanities, 14nke na-aza ajụjụ na ego, 14nke na dentistry na 18 na nkà mmụta ọgwụ.
Melbourne bụ isi campus-emi odude ke Parkville, ihe dị n'ime esịt n'ebe ugwu nke Melbourne Central n'ógbè azụmahịa, na ọtụtụ ndị ọzọ campuses odude gafee Victoria. Melbourne bụ a sandstone mahadum na onye so na Group of Eight, mahadum 21 na Association of Pacific rim Universities. ebe ọ bụ na 1872 dị iche iche residential kọleji na-mmekọ na mahadum. Enwere 12 kọleji dị na isi n'ogige ụlọ akwụkwọ na nso ala ịta ahịhịa àjà agụmakwụkwọ, Sporting na omenala omume n'akụkụ ulo n'ihi na Melbourne ụmụ akwụkwọ na ngalaba.
Melbourne comprises 11 iche iche agụmakwụkwọ nkeji na-ejikọta ya na ọtụtụ institutes na emmepe research, gụnyere Walter na Eliza Ụlọ Nzukọ Institute of Medical Research, Florey Institute of Neuroscience na Mental Health, na Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research na Grattan Institute. N'etiti Melbourne si 15 gụsịrị akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ ndị Melbourne Business School, na Melbourne Law School na Melbourne Medical School-karịsịa ele anya ọma.
Anọ Australian praịm minista na ise ndị gọvanọ-general gụsịworo Melbourne. Nine Nobel Laureates ndidi ụmụ akwụkwọ ma ọ bụ ikike, kasị nke ọ bụla Australian mahadum.
The University of Melbourne arụ ihe pụrụ iche aha na ụwa rankings anọgide ịtụkwasị anyị dị ka Australia si eduga keukwu research-kpụ ọkụ n'ọnụ mahadum, na otu onye nke ụwa si n'elu 50.
Melbourne-adọta ndị kasị mma na-egbuke egbuke ụmụ akwụkwọ na-eme nnyocha na, na a akụkọ ihe mere eme nke n'elu 160 afọ, anyị n'ọgbakọ a pụrụ iche ebe na obi anyị obodo ahụ omenala idaha.
Melbourne Ukpep School of Education
Office maka Environmental Programs
Ukpep School of Humanities & Social Sciences
Melbourne School of ozi
Melbourne iwu School
Melbourne School of Population na Global Health
Faculty of Veterinary na Agricultural Sciences
Victorian College nke Arts (VCA)
The University of Melbourne guzobere Hugh Childers, na Auditor-General na Finance Minister, ke akpa emefu ego Speech on 4 November 1852, onye-ewepụta a nchikota nke £ 10,000 na nguzobe nke a mahadum. The mahadum guzobere Act of incorporation on 22 January 1853, na ike inye degrees na nkà, nkà mmụta ọgwụ, iwu na music. The eme nyere maka kwa afọ onyinye nke £ 9,000, mgbe a pụrụ iche Onyinye nke £ 20,000 e mere maka ụlọ na afọ. The ntọala tọrọ on 3 July 1854, na na otu ụbọchị na ntọala maka State Library Klas bidoro na 1855 na atọ ọkachamara na iri na isi ụmụ akwụkwọ; nke ahụ a nke ụmụ akwụkwọ, nanị anọ gụsịrị akwụkwọ. The mbụ ụlọ eze meghere site Lieutenant Governor nke Colony of Victoria, Sir Charles Hotam, on 3 October 1855. The mbụ chancelo, Redmond Barry (mgbe e mesịrị Sir Redmond), ẹkenịmde ọnọdụ ruo mgbe ọnwụ ya na 1880.
Nraranye nke mahadum e mere omume site na akụ na ụba n'ihi Victoria gold rosh. The alụmdi e mere na-a “ọganihu mmetụta” na a oge nke ngwa ngwa mmezi na azụmahịa ibu.
na 1881, na ha kwetara na ndị inyom nọ na-a hụrụ dị ka mmeri ọzọ mgbanwe ọchịchị kansul.
The mahadum 150th ncheta na-eme ememe na 2003.
Ị chọrọ atụle The University of Melbourne ? ajụjụ ọ bụla, comments ma ọ bụ reviews
The University of Melbourne na Map
photos: The University of Melbourne ukara Facebook
Jikọọ na-atụle nke The University of Melbourne.